Blog | SMSPoh
Viber Business Message
SMS Coupon Platform New
Sign Up and send free SMS messages.
2 Factor Authentication (Verify API)
SMS Two Factor Authentication ဆိုတာဟာ အငျတာနကျအသုံးပွုသူ တဈီဥးဦးမှ Software ကနဖွေဈစေ အငျတာနကျ Website မှဖွဈစေ လော့ချအငျပွုလုပျရာတှငျ ပိုမိုလုံခွုံစရေနျအတှကျ လုံခြုံရေးဆိုငျရာ စဈဆေးသတျမှတျခကျြဖွဈပါတယျ
Publish At: 2020-03-06 12:49:16
Sender ID (Brand Name) ဆိုတာဘာလဲ
Sender ID ဆိုတာ SMS မကျဆပေို့လှတျလိုကျတဲ့သူဟာ ဘယျသူလဲဆိုတာ လကျခံရရှိတဲ့သူရဲ့ ဖုနျးမှာ သတျမှတျပွသပေးတဲ့ အမညျ သို့မဟုတျ နံပါတျအတို တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ လူကွီးမငျးတို့ရဲ့ အမှတျတံဆိပျ သို့မဟုတျ ကုမ်ပဏီကို အခွားမြားပွားလှစှာသော ...
Publish At: 2020-01-15 16:49:37
SMSPoh Notifications Channel for PHP Laravel Framework
This package makes it easy to send notifications using SMSPoh with Laravel 5.5+ and 6.0 by Tint Naing Win
Publish At: 2020-01-07 20:13:10
ဘာဖြစ်လို့ SMS တွေ မထွက်ရတာလဲ ၊ SMS တွေ မထွက်ဘူးလို့ သံသယဖြစ်နေသလား
အကယ်၍ မိတ်ဆွေတို့ဟာ SMS Provider တစ်ခုခုနဲ့ အသုံးပြုနေပြီးတော့ သင့်ရဲ့ SMS တွေ မထွက်ဘူးလို့ သံသယ ရှိချင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အောက်ဖော်ပြတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို သိရှိပြီးတော့ နားလည်မယ်ဆိုရင်တော့...
Publish By: smspoh_admin
Publish At: 2019-03-06 20:07:14
SMS Delivery Reporting (DLR Report)
DLR ဆိုတာ SMSC (Short Message Service Center) ကနေ ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ Message တွေရဲ့ တစ်ကယ့် Mobile Subscriber တွေဆီကို ရောက်မရောက်ဆိုတဲ့ Status Report ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်
Publish At: 2019-02-13 12:07:03
SMSPoh SDK for PHP Laravel Framework
SMSPoh SDK for PHP Laravel Framework was build by professional developer Pyae Sone. The SDK is available to download at Github for free. If you are using Laravel Framework for your PHP project, we strongly recommend you to checkout ...
Publish At: 2018-03-11 06:24:07
© SMSPoh 2017 - 2022 All Rights Reserved by IntelliSoft
Facebook Enterprise Blog SLA Privacy Terms and Conditions FAQ Contact